Ministry of Electric Power No.(1): အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာနနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံ ကုမ္ပဏီများ သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာ လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနား ကျင်းပ
(နေပြည်တော် ဖေဖော်ဝါရီ ၂၅၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေး ဦးစီးဌာနနှင့် တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Hanergy Holding Group Limited (Hanergy)၊ Goldwater Resources Limited (GRL) တို့ အထက်သံလွင်(ကွမ်းလုံ) ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက် သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာ (Memorandum of Agreement) လက်မှတ်ရေးထိုးပွဲ အခမ်းအနားကို ဖေဖော်ဝါရီ ၂၄ ရက် ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ် စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
အဆိုပါ အခမ်းအနားသို့ အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် အခွန်ဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဗိုလ်ချုပ်လှထွန်း၊ ရှေ့နေချုပ် ဦးအေးမောင်၊ ဒုတိယ၀န် ကြီးများ၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်များ၊ ဦးဆောင် ညွှန်ကြား ရေးမှူးများနှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတော်ဆိုင်ရာ တရုတ် ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး H.E. Mr. Ye Dabo၊ Economic and CommercialCounsellor Mr. Jin Honggen၊ Hanergy Holding GroupLimited (Hanergy) မှ Board Chairman & CEO Mr. Li Hejun နှင့် တာဝန်ရှိသူများ၊ Goldwater Resources Limited (GRL)မှ Director Mr.Chua Chay Jin နှင့် တာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ကြသည်။
ရှေးဦးစွာ အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မင်းက အမှာစကား ပြောကြားသည်။
ဆက်လက်၍ တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Hanergy Holding GroupLimited (Hanergy) မှ Board Chairman & CEO Mr. Li Hejun က လက်မှတ် ရေးထိုးခြင်းနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားသည်။
ထို့နောက် အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ရေအားလျှပ်စစ်စီမံရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးကြီးစိုးနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ Hanergy Holding GroupLimited (Hanergy) မှ Board Chairman& CEO Mr. Li Hejun တို့သည် သဘောတူညီမှု စာချွန်လွှာများကို လက်မှတ်ရေးထိုးကြပြီး အပြန်အလှန် လဲလှယ် ခဲ့ကြကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
| Labels: အထက်သံလွင်(ကွမ်းလုံ) (Upper Thanlwin(Kunlong))